"नागरिककाे सेवा गर्न पाउदा खुशी छु"मेयर पण्डित - Ekikaran News
नुवाकाेट। एउटा मेयरकाे सीमा न.पा. भित्रकाे विधि निर्माणको तहमा हुन्छ भन्ने हेक्का भए पनि कतिपय व्यवाहारिक सन्दर्भले खरो उत्रिनुपर्ने अनुभव र अभ्यास गर्छन्, विदुर नगर पालिकाका मेयर तथा नेकपा जिल्ला कमिटि सदस्य ,युवा नेता सन्जु पण्डित।
नुवाकाेटकाे राजनीतिक र सामाजिक भावलाई वुझेर विधी र नियममा केन्द्रित हुने मेयर पण्डित जनताकाे मन र भावना वुझ्नलाई न‌ै आफ्नाे नगरमा विकासको लहर ल्याउन योगदान गरिरहेका छन् । यहि नै व्यवाहारिक पाटो हो हाम्राे समाजको ।
जनताले संविधानको व्यख्या र नगरपालिकाकाे परिधी र कानुनका विषयमा मेयरलाई गुनासो गर्दैनन् । जब क्षेत्रमा पुग्छन प्रतिनिधि उनीहरूको भावना खोला, पुलेसो, बाटोसँग नै जडित हुन्छन् ।
मेयर पण्डित भन्छन्,”जनप्रतिनिधिको हैसियतले स्थानीय तह वा विधान र कानुन होस् ,आम जनताको चाहना विकास र रुपान्तरणकै तहमा बुझिन्छ । हामीले मेयरकाे भूमिका न. पा.काे विधी र पद्धति निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ भने पनि निर्वाचनका बेलामा पुल, बाटो, कुलो खानेपानी भन्ने नै जनताको माग हुन्छ”। “हामीले जानेर नजानेर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विकासको भावनाकै पक्षले निर्वाचन जितेका हुन्छौं । त्यो पूरा नगर्दा फेरि अर्को पटक जनतामा जाने आधार पनि हुँदैन । हामीले पनि अनुभूती गरेका छौं । तर परिवर्तन त अवश्य हुनुपर्छ”।
जनताको विकासको भावनासँग जोडिनुपर्ने कारण खुलाउँदै पण्डित फेरि एकछिन साेच्दै सुनाउँछन् र भन्छन्। “समाज परिवर्तन गर्ने भनेको मानव सूचाङ्कको डाटा सच्याउने नै हो । कुरा ठूला गर्ने काम नगर्ने, चर्चामा आउनका लागि मात्र कुरा गर्ने भन्ने प्रपञ्च छ। यसलाई चीर्न विकासकै कसीमा व्यवाहारिक अभ्यासमा उत्रिनुको विकल्प छैन । म त्यसैको परिक्षामा छु”।
मेयर पण्डितकाे विकासका कार्ययाेजनाहरु छन्। मान्छेकाे अनुहार ,पार्टि र आफ्नाे भन्नेनै हुदैनन् । जस्ले गरेपनि काम इमानदारी र पारदर्शी रुपमा हुनुपर्छ । आफ्ना र अरुकाे भन्नेनै हुदैन, विकासका लागि सवै समान हुन्छन्। काेहि कसैलाई प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएका कारण मेयरकाे विराेधमा लागेका हुन सक्छन्। उहाँ भन्नु हुन्छ “मलाई अनर्गल र हल्लाले फरक पार्दैन। कसैकाे फाईदा र नाफाकाे लागि सम्झाैता गरेर वाहि वाहि पाउनु छैन। सुशासन र पारदर्शिताका लागि काेहि रिसाउलान भन्ने चिन्ता नि छैन”।
मेयर पण्डितले “स्थानिय सरकारकाे विभिन्न अंशसँग आफुलाई संयोजन गर्नैपर्छ । अहिले पनि राज्यका विभिन्न तहमा रहेका सुखदुखको साथीको सहयात्री हुन पुगेको छु।राज्यको प्रशासनीक तहमा के- के रहेछन् भन्ने बुझ्ने मौका पाएँ। मेरो व्यक्तिगत स्वभावका कारणले पनि हुन सक्छ सबैकाे साथ र सहयोग प्राप्त भयाे”।
तर्क वा संवादमा हैन, आँकडा र व्यवाहारमा नै पण्डितकाे विकास मन्त्रले काम गरिरहेकाे छ। यसका सयाैं उदाहरण छन् । विदुर नगरपालिकाकाे नगर प्रमुखमा निर्वाचित पण्डितकाेको पहलमा त्रिशुलि बसपार्क र वट्टार बसपार्ककाे मुहार फेरिएकाे छ। ढुङ्गे देखि त्रिशुली बजार हुँदै तुप्चे र साेले सम्मकाे सडकमा आएका परिवर्तनहरु मात्रै हैन नयाँ क्षेत्र जुन नगरपालिकामा गाभिएका थिए । त्याँहाका विकासका कामहरुले साच्चै जनताका नेता भएकाे महशुस गराएकाे छ। त्रिशुलीमा नयाँ पुलकाे लागी गरिएकाे पहल अनि विदुर नपा का ८ र १३ वडामा जाेड्ने पक्कि पुल निर्माण मात्रै हैन एक वडा एक खेलकुद मैदान,दिवा वृद्ध आश्रम,एक वडा एक पार्क जस्ता सामाजिक रुपान्तरणका याेजनाहरुले सामाजिक भावना र सामाजिक सुरक्षाकाे प्रत्याभुत भएकाे छ।
विद्यालय भबन, शाैचालयका लागि अनुदान र वजेट संगै नगरपालिकाले स्वयमसेवी शिक्षकहरु विद्यालयमा आवस्यक्ताका आधारमा पठाएर शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएकाे छ। गरिव र जेहन्दार बालवालिकाहरु लाई सरकारी विद्यालयमा पढाईकाे गुणस्तर राम्राे हाेस भनेरै कक्षा ५ सम्म न.पा.ले नै पुस्तक निशुल्क वितरण गरेर अङ्ग्रेजी माध्यमा पढाईहुने वातावरणकाे निर्माण गरेकाे छ।
स्थानिय वजेट र याेजना वाहेकका प्रदेश र संधिय सरकारका धेरै याेजनाहरु न.पा.भित्र ल्याउन भुमिका खेलेका मेयर पण्डितले मदनभण्डारी प्रदेश रङ्गशाला, प्रदेश स्तरीय पार्कहरु, वहुप्राविधिक शिक्षालय लगाएत नदि तटबन्धकाे विविध याेजना र बिकासका कामहरुमा सफलता पाएका छन्। PCR(पिसिआर)मेसिन खरिद देखि त्रिशुलि अस्पताकाे सुधार र स्तनाेत्तरि अनि सुख्खा ठाउँहरुमा डिपाेरिङ्ग मार्फत खानेपानीकाे सहजिकरण लगाएतका जनमुखी कामले पनी मेयर पण्डितकाे विकासमा रहेकाे लगाव प्रष्टिन्छ। काकाकुल नगरबासिहरु लाई खानेपानीकाे दिर्घकालीन सामाधानकाे लागी विदुर खानेपानी समिति संग हातेमालाे गर्दै बृहत् शहरी खानेपानी याेजनाकाे निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाे छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा स-साना र ठूला आयोजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी पण्डित अगाडि बढेका एउटा सफल मेयर यसकारण पनि हुन् कि आफ्नाे र आफ्ना लागी हैन जनता र विशेष गरि विदुरबासीहरुकाे सुखदुख र समस्या लाई पूरा गर्नैमा रमाउनुनै पण्डितकालागि सवैभन्दा ठुलाे सपना र उदेश्य हाे।
पण्डितकाे पहलमा भएका अनेक काम छन् । उनी प्रशासकदेखि प्रहरीसम्म, वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म धाउने अनेक कारण भनेकै नगरका जनताले पाउनुपर्ने सुखको तिर्खा हो । “हामी निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ तर कसका लागि भन्ने प्रश्न हुन्छ । जनताको खुसी र सुखका लागि खट्नुपर्छ यहि मेरो मनमा रहन्छ”। उहाँले बताउनुभयाे।
कतिपय अवस्थामा सरकारले गरेका राम्रा कुरा जनतामा गएका छैनन् भन्ने तर्कमा सहमत छन् उहाँ। सरकारमा गलत सूचना पनि गएका छन् । समग्र कोणबाट सरकारले सूचना पाउन सकेको छैन भन्ने मानकले नै विकासमा पनि कतै ठेस लागिरहेको हो की भन्ने लाग्छ मेयर पण्डितलाई।
विकासका लागि स्थानिय सरकारका बजेटमा रहेको रकम खर्च गर्न सकिन्छ । पालिकामा हुने विकास खर्च पनि यहि मापनको आधार हो।मेयर पण्डितले वडाध्यक्षसम्म पार्टी फरक भए पनि विकासका सवालमा समन्वय गर्नुहुन्छ भन्ने चर्चा नै छ। र म गर्छु पनि । विकासका लागि विचार र पार्टी भन्ने हुँदैन।
मेयरकाे आफ्नाे एउटा उदेश्य र कार्ययाेजनाहरु छन्। त्यसले मापन गरेको आधारमा काम हुन्छ । “चुनाव जितेर मेयर भएपछि मान मर्यादा चाहिन्छ भन्ने सामन्तवादी अवशेषको स्थिति पनि छ । विद्यमान समस्याभित्र घुलमिल गरेको खण्डमा लोकप्रिय ढंगले स्थापीत गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा साथीहरूले त्यसलाई बुझ्न र अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ”।मेयर थप्छन । “राम्रा काम र याेजनाहरुकाे सफल कार्यान्वयनमा लागिरहँदा राजनितिक प्रतिशाेधले अनावश्यक दाेषाराेपण र आराेपहरु खेप्नुपर्दा केही असहजता महशुस भएकाे छ। मेराे जिवनकाे एउटै मात्रै ध्येय भनेकाै समृद्ध विदुरकाे निर्माण गर्नु हाे। साथिभाई र आमनागरिककाे साथ र समर्थनले मेराे सपना पूरा गर्न लाग्ने छु”।
बुधबार, आश्विन १४ २०७७ मा प्रकाशित